FAQs - Hangzhou Precision Machinery Co, Ltd.
Chigadzirwa chakasarudzika chiripo?
Ehe, ingotiudza isu zvikumbiro zvako, tinogona kukuitira iwe.Uye zvinogona kukwidzirisa chirongwa chako.
Ini ndinobhadhara imwe mari yekushandurwa?
Zvinoenderana kana iwe uchingoda kuchinja senge magetsi, saizi yekuongorora, flange nezvimwe zvakasununguka. Kana iwe uchida kushandura chikamu chepakati, kana kuwedzera zvivakwa zvinotsigira, tambo yegungano, nezvimwewo tinogona kukurukura zvinoenderana nemari yacho.
Ini ndinofanira here kuchinja yangu yazvino yekushanda tambo kana ini ndikashandisa chigadzirwa chako?
Kwete, isu tichasarudza nekugadzira chigadzirwa zvinoenderana neyako yazvino yekushanda tambo.
Ini ndinogona kuwana muyenzaniso pamberi peodha?
Chokwadi, akabhadharwa sampuli anowanikwa. Iwe unogona zvakare kukwereta iyo lab level ultrasonic michina kutanga kuyedza mhando uye kushanda kushanda. Kana ikasangana nezvido zvako, unogona kutenga chikamu chemaindasitiri ipapo, uye mari yemaroja inogona kushandiswa sekubhadhara zvinhu.
Mushure mekuraira kana kukwereta muyenzaniso, maitiro ekuyedza ndiwo anonzwisisika?
Usati washandisa iyo michina, isu tinobvunza zvaunoda uye mhinduro.
Mushure mekushandisa chishandiso, isu tinopa iwo anoenderana matanho ekuyedza uye yekushandisa bhuku.
Kana iko kuedza kwapera, isu tinokubatsira iwe kutora akakodzera marekodhi edata.
Uri fekitari kana kutengesa kambani?
Fekitori yedu ine nhoroondo ingangoita makore makumi matatu kubvira payakagadzwa.Iine angangoita zana emadhivhi uye anopfuura gumi nemashanu nyanzvi R&D vashandi.Iyo iri muHangzhou, tinogamuchirwa kushanya uye kutaura.
Kubhadhara & Kuendesa & garandi?
T / T, L / C pakuona, Western Union, PayPal, Visa, Master Card.
Mukati memazuva ekushanda manomwe echinyakare chigadzirwa, makumi maviri ezuva rekushanda reyakagadziriswa imwe.
Chigadzirwa chimwe nechimwe kunze kwekushandisa chine waranti yemakore maviri.
Iwe unongogadzira chete uye kutengesa michina yemagetsi?
Isu tiri mugadziri anoshanda mukugadzirwa kweiyo ultrasonic michina uye maindasitiri mhinduro yeiyo ultrasonic michina. Isu hatisi chete kupa zvigadzirwa zve ultrasonic, asi zvakare zvimwe zvinoenderana nemidziyo inoshandiswa mukugadzirwa kwemaindasitiri. Semuenzaniso, blender. Isimbi isina tangi inosanganisa tangi, michina yekurapa mvura, girazi bvunzo tangi, zvigadzirwa zvemagetsi zvichingodaro.
Ndinogona here kuva muparidzi wako?
Ehe, isu tinogamuchirwa. Isu tinoda vamwe vatengesi vanoshanda kuti vabatane nesu kusimudzira maraki edu uye kuwedzera kuti titore mimwe misika. Hunhu hwekutanga.
Kune fekitori, isu tine ISO; Kune zvigadzirwa, isu tine CE. Ye Kugadzira kunyorera, isu tine nyika Patent.
Chii chiri kumberi kwako?
Isu tiri vekutanga kugadzira zvigadzirwa zve ultrasonic muChina. Iyo yekutanga michina yakavimbika muhunhu uye yakasimba muR&D.
Asati arongeka: makore gumi kutengesa uye makore makumi matatu mainjiniya vanopa kuraira kwenyanzvi nezvechigadzirwa, rega iwe utore zvinhu zvakakodzerana.
Panguva yekuraira: Nyanzvi inoshanda. Chero kufambira mberi kuchakuzivisa iwe.
Mushure mekuraira: makore maviri warandi nguva, yehupenyu hwese hwekutsigirwa